Somali / March 17, 2020
Wargalin muhiim ah oo ka socota Dugsiyada Cherry Creek
Gacaliyayaal Bulshada Degmada Dugsiyada Cherry Creek,
Waxaan rabaa inaan idinla socodsiyo xaalada koronafayraska (COVID-19) iyo saameynta joogtada ah ee u ku leedahay ardayda, shaqaalaha, qoysaska iyo bulshada.
Sidaad ogtahiin, iskooladeena waxay u xiranyihiin nasashada guga todobaadkan waxayna xirnaan doonaan ilaa Jimcaha soosocda, March 27keeda sida ugu dhakhsaha badan ee aan u ogaano hadii iskoolada ay xirmi doonaan wixii ka danbeeya taariikhdaas, waan idiin soo sheegi doonaa.
Qiimaynta Ardayda ee Soo socota
Maanta Waaxda Waxbarashada Colorado waxay dhaaftay qiimeyntii-dhamaadka-sanadka, oo ay kujirto Talaabooyinka Colorado ee Guusha Tacliinta (CMAS). Waan ku faraxsanahay talaabadan ay qaaday CDE maadaama ay noo ogolaan doonto inaan diiradda saarno waxbarashada halkii aan imtixaanka ka qaadi lahayn, marka aan ku soo laabanno dugsiga. Waxaan sii wadaynaa inaan la shaqeyno CDE arrimaha kale, oo ay ku jiraan waqtiga wax dhigista. Qorsheynta ayaa wali socota oo ku saabsan maamulka SAT iyo PSAT. Faahfaahin dheeraad ah ka hel
Quraac,Qado iyo Buug
Laga bilaabo Jimcaha, March 20keeda, Iskoolada Cherry Creek waxay bixin doonaan quraac, Qado iyo Buug loogu talagalay caruurta 18 sano jirta iyo kuwa kayar. Degmadu hore yaa loo qorsheeyay inay noqoto fasaxa gu'ga laga bilaabo March 16 ilaa 20. Si kastaba ha noqotee, waxaan bilaabi doonnaa inaan siino quraac iyo qado bilaash ah bisha March 20keeda11 goobood oo ka tirsan degmada oo dhan. Macluumaad dheeri ah ayaa laga heli karaa quraac,qado iyo buug boga macluumaadka ee www.cherrycreekschools.org/cuno bilaash ah.
Waxaan la shaqeynaynaa ururada maxalliga ah, kaniisadaha iyo bulshadeena si aan u taageerno xarumaha cuntada ee qoysaska u baahan. Waaan idinla la soo socod siin doonnaa waxii macluumaad dheeri ah oo la xiriira fursadahan dhamaadka usbuuca.
Macluumaadka wax-Barashada ee Inernetka
Hogaamiyeyaasheena manhajka waxay soo diyaariyeen liis tayo sare leh, ilaha waxbarasho ee laga yaabo inaad ubaahantahay inaad ilmahaaga uga faa'iideysato inta lagu jiro xiritaankan aan horay loo arag. Macluumaadkan looguma talagalin inuu badalo booskii casharka fasalka lagu dhigto – ma-ahan "shaqo-guri" home work- buundana laguma bixin doono waa iska-wax u baro. macluumaadkan yaa loogu talagalay in la siiyo fursad dhamaan carruurta ku jirta nasashada in ay helaan wax-barasho wanaagsan inta lagu jiro xiritaankan. Macluumaadka ku saabsan waxaa lagu dhajiyay halkanwww.cherrycreekschools.org/macluumaadka waxbarashada.
Dugsiyada Cherry Creek waxey sii wadayaan inay ka shaqeeyaan fursadaha dheeriga ah ee barashada dugsiyada dibada ka ah.Waan idiin soo sheegi doonaa waxii macluumaad dheeraad ah waqtiga guga ka bacdi-spring break.
CHSAA – Ciyaaraha Gu’ga
Waxaan helnay war maanta, in la waafajiyo tilmaamaha qaran iyo tan maxalliga ah, Ururka Waxqabadka Dugsiyada Sare ee Colorado ayaa ku kordhiyey tartankii cayaaraha gu'ga ilaa bisha Abriil 18keeda. Ka hel macluumaad dheeraad ah halkan https://chsaanow.com/2020-03-17/-dib loo dhigay ciyaarihii guga loona kordhiyey ilaa April 18 tartankii miyusiga waa la baajiyey.
Waxii la xiriirtaa howlaheena hada, iyo howlaha mustaqbalkaba (sida xafladaha, dhamaadka dabaaldegyada sanadka, qalin jabinta, iwm), waxaan sii wadaynaa inaan la shaqeyno oo aan raacno tilmaamaha Waaxda Caafimaadka Tri-County, Waaxda Caafimaadka Bulshada iyo Deegaanka Colorado. , iyo CDC (Xarumaha Xakamaynta Cudurrada) waxii la xiriira COVID-19. Waanu kula soo socodsiin doonaa wixii ku saabsan iyo wixii ku soo kordha. Macluumaadka waxii cusub, Su'aalaha la isweydiiyo iyo ilo muhiim ah ayaa laga heli karaa boga websaydka ee Iskoolka 'cherry Creek' ee ah www.cherrycreekschools.org/coronavirus.
Hadafkeygu had iyo jeer waa inaan ilaaliyo amniga, caafimaadka iyo wanaaga ardayda, shaqaalaha iyo qoysaska. Iyada oo ay jirto walaac iyo cabsi ay musiibadan keenayso, iskaashiga bulshada yaa ah gashaanka ugu weyn. Waad ku mahadsantihiin taageeradaada iyo iskaashiga inta lagu jiro waqtigan aan caadiga ahayn.